Amaphephadonga ama-5 amahle kakhulu we-KDE | Kusuka kuLinux
Sibeke phambi kwabaningi amaphephadonga kwama-distros amaningana, kepha ... zimbalwa kakhulu izindawo ezinjengalezi, ngithanda ukuqala ukulungisa lokhu 😀
Lapha ngishiya amanye amaphephadonga we KDE:
Futhi ... ngikushiya lena enye engiyishintshe 1 esikhathini esedlule:
Ngiyethemba ubathandile 😀
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukubukeka / Ukwenza ngezifiso » Amaphephadonga ama-5 amahle kakhulu nge-KDE
Ngiyayithanda! wonke umuntu muhle (* w *)
Amaphephadonga amahle kakhulu wabalandeli be-KDE 🙂 Kungezwe kuqoqo
Ngiyayithanda impela i-KDE .. yiDolphin kuphela engazibuki ngokuzenzakalela zamavidiyo, kuphela izithombe 🙂
kepha buehh akukho okuphelele ^^ ahaha
INautilus noma iThunar ayishodi ngalutho "ngokuzenzakalela", akunjalo? 😛
Masikhombe (kulabo abangayazi i-KDE nokusatshalaliswa kwayo kahle) ukuthi ukubuka kuqala kungangezwa kalula. Futhi kukhona ukusatshalaliswa okuletha ukubukwa kwevidiyo ngokuzenzakalela (njengeMandriva).
Ngicabanga ukuthi bekungumbuzo wokubhuqa, kodwa ngizokutshela okuthile. Kungenzeka ukuthi i- IThunar y Nautilus ezinye izinto zishoda ngokwakhona (okokuqala ngaphezu kwesibili), kodwa okungenani izithonjana zamavidiyo ziyaphuma 😛
EMandriva bayaphuma (futhi basebenzise iDolphin), lapho-ke kuyisinqumo sokwabiwa okuphumayo noma okungaphumi ngokuzenzakalela 😉.
Ziyaphuma, kepha ngemuva kokufaka amaphakheji ahambisanayo, ngokuzenzakalela aziphumi.
Angikhumbuli ukufaka amaphakheji ngenhloso kusuka ku-Virtualbox ukubona izithonjana. Ngempela ngilindile Youtube ukufakwa nokuxhumana naye okokuqala, angifaki i-ffmpegthumbs noma okufanayo (ekugcineni ngivula iDolphin nezithonjana zamavidiyo ziyisimangaliso).
Futhi ngoPardus ikota ezintathu ezifanayo. Kufanele nje usebenzise izithonjana kuzilungiselelo zeDolphin. Amaphakeji adingekayo afakiwe ngokusatshalaliswa okuzenzakalelayo.
Yilapho inkinga ikhona.
ukuthi kulokhu KUPHAKAMA kwempilo ... iphrojekthi ye-KDE ayiklami ukukhombisa amavidiyo ngokubuka kuqala ...
njalo kufanele uthinte noma ungeze iphakethe elithile ¬¬
@ jamin-samuel, awufundanga ukuphawula kwami ​​kwangaphambilini? Uma ukwabiwa kufuna, bangaba nezithonjana zevidiyo ezenzakalelayo eDolphin. I-KDE ikuvumela lokho nokunye okuningi.
Ngingathanda ukuthi uThunar noNautilus babe nebha yokuhlunga ngokuzenzakalela. Noma ukuthi zazenziwe ngezifiso njengeDolphin, kepha lokho akuzuzwa ngokufaka amaphakheji amaningi ...
IWindóusico ayidingeki ngoba lokho kwenziwe kahle ^^
T_T Ngiyazinikela \_ o / uzowina.
ahahaha broder ethule .. siyefana ^^
Ngisho i-thunar ne-nautilus.
Ngisasebenzisa iDolphin futhi anginankinga yokuthi kufanele ngifake i-kffmpeg * (angikhumbuli ukuthi ibizwa kanjani) evulekileSUSE / Chakra ukuze ikhombise izithonjana kuvidiyo.
Ngiyakhumbula lapho ngifaka isithonjana sevidiyo se-mplayer (kuvulekileSUSE) futhi lokhu ngaphezu kokukhombisa ukubuka kuqala kwevidiyo, lapho kufakwa isikhombisi segundane phezu kwevidiyo kwaqala ukukhombisa amafreyimu ahlukene evidiyo efanayo ne-slide show, ngi angazi ukuthi okwamanje iyasebenza yini, isivele inokuningi engingakufaki.
Akusizi ngalutho ukuthi ihlengethwa labizwa ngokuthi imenenja yefayela ehamba phambili ka-2011.
Izihlungi, amathegi amafayela, izinga lokwenza ngokwezifiso, ukuphela okushumekiwe, njll.
Futhi njengoba usho, lokho kuya nge-distro uma benikeza ukusekelwa ngo- "okuzenzakalelayo" ekuhloleni kuqala kwevidiyo.
sieg84 futhi yini lawo ma-distros?
Bheka i-distro yakho bese ubheka amaphakheji athi isithonjana.
Yilokho okunikeza ukusekelwa ngo- "default" (ungasho) ukunqamula noma i-nautilus kuma-distros afana ne-lmde noma i-linuxmint yokubukwa kuqala kumavidiyo, eza kuqala efake ama-multimedia codecs.
Noma ugoogle isikhashana bese uphenya ukuthi iyiphi iphakheji edinga i-thunar ne-nautilus ukukhombisa ukubuka kuqala kwevidiyo.
Ngokuzenzakalelayo i-thunar noma i-nautilus ayinakho ukubuka kuqala kwevidiyo njengehlengethwa.
Yebo, IThunar isidingo se tumbler ngezithonjana, kepha empeleni tumbler, iza ngaphakathi kwamaphakeji asemqoka .. ngakho .. ngokuyisisekelo uma iza ngokuzenzakalela 😛
Iqiniso ukuthi ngizophenya kancane.
kodwa into eyodwa iqinisekile .. UFedora osebenzisa iGnome emsulwa futhi ngaphandle kwezithasiselo zamakhemikhali .. ungabona ukubuka kuqala kwamavidiyo
@ sieg84, xolela ukudideka kwami. Njengoba uqale ngo- "Bayaphuma, kodwa ngokuhamba kwesikhathi ..." nomyalezo wami wangaphambilini uqale ngo- "EMandriva bayaphuma ...", ngicabange ukuthi bekuyimpendulo kimi, hhayi ku-elav.
I-Thunar / Tumbler idinga i-libffmpegthumbnailer, njenge-Dolphin idinga i-ffmpegthumbnailer, ngakho-ke ayizi ngokuzenzakalela. 😀
Njengoba u- @ Windóusico esho, kuya nge-distro uma ifuna ukuyisekela ngokuzenzakalela noma cha.
Kumavidiyo kufanele ufake iphakheji: ffmpegthumbs
Njengoba i-penultimate kufanele yehlukane
Eyokugcina engangiyithanda! Kubi kakhulu ukuthi kunophawu lweKubuntu. Ngubani umbhali? Ngabe amafayela womthombo wesithombe ayatholakala?
Uma kungenjalo ngeGimp, nina bantu abadala ninolwazi oluningi.
Anginawo amafonti, kepha… ingabe uyithandile eyodwa enezinhlamvu? hehe kimi ngokufanayo 😀… ufuna ukwenza luphi ushintsho ku-logo, mhlawumbe ngingakwenza (uma kungeyona inkimbinkimbi kakhulu hehe)
Yebo ngingakwenza ngokuphelele, kepha ukukwenza ku-png kubonakala ngathi yi-ñapa. Ilogo ye-KDE (ukuyenza ibe ejwayelekile). Ngokwami, ukube benginemithombo, bengizobeka uphawu lwe-distros engiyisebenzisayo (iChakra, i-Arch, iMageia neMandriva: P)
Izindlela ezi-5 zokukhulisa usayizi windows kuXubuntu noma kuXfce
Ukuhlola i-Xubuntu 12.04 [Ukubuyekeza] + Ukulanda